Search သားအမိလိုး - BajarFB.com
Search Results - သားအမိလိုး
ပေါ့ဆလို့မရဘူးနော် အမျိုးသမီးထုကြီးတို့ ဆေးရုံမှအလူးအလဲခံစားနေရတာတွေ မမြင်ရက်ဘူး အမျိုးသမီးထုကြီး ဂရုစိုက်ကြပါ အမျိုးသမီး အများစုမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ သားအိမ်လုံးတည်ခြင်း ရောဂါ အကြောင်း ဒါကတော့ အမျိုးသမီး အများစုမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ Uterine fibroid လို့ခေါ်တဲ့ သားအိမ်လုံးတည်ခြင်း ရောဂါ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။ Uterine ဆိုတာက သားအိမ်နဲ့ ဆိုင်သော၊ သားအိမ်နဲ့ ပတ်သက်သောဟု ခေါ်ဆိုပါ တယ်။ Fibroid ဆိုတာကအမျှင်ကြမ်း တစ်ရှုးမျှင် များနှင့်ဆိုင်သော၊ သားအိမ်တွင် ပေါက်နေ သော၊ ကု၍ ရသည့် အမျှင်ကြမ်း အသားလုံးကို ခေါ်ဆိုပါတယ်။ သားအိမ်အလုံး ဆိုသည်ထက် ”ရေအိတ်”ဟု အများက သိထားကြတယ်။ ဒီအရာက ဖြစ်တည်ပုံ သုံးမျိုး၊သုံးစား၊ သုံးနေရာရှိတယ်။ (1) Intramural fibroids ‘ဆိုတာက သားအိမ်အလုံးဟာ သားအိမ်ရဲ့ အတွင်းနံရံမှာ ( grow in the wall of the uterus ) ဖြစ်တည်နေတာပါ။ (2) Subserosal fibroids ဆိုတာက သားအိမ်ရဲ့ အပြင်ဘက်အလွှာ ( grow on the outside of the uterus) မှာ ဖြစ်တည် နေတာပါ။ (3) Submucosal fibroids ဆိုတာက သားအိမ်ရဲ့ အတွင်းဆုံ အလွှာကနေ ဖြစ်တည်နေတာပါ။ ဒီသားအိမ်လုံး၊ သားအိမ်အကျိတ် (ခေါ်) သားအိမ်ရေအိတ်ဟာ တစ်လုံး (သို့မဟုတ်) တစ်လုံးထက်ပိုပြီး ၃/၄ လုံးအထက် ဖြစ်တည် နေတတ်ပါတယ်။ အလုံး အသေးလေးကနေပြီး အလုံး အကြီးကြီးထိ ဖြစ်တည်လာနိုင်သလို အရွယ်အစားအားဖြင့်လည်းမတူညီပါဘူး။ အချို့ဆိုရင် အလုံးက ကြီးနေလို့ ကိုယ်ဝန်သည် မိခင်လောင်း ဗိုက်မှ မြင်တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သားအိမ် (Uterus) ထဲမှာ ဒီအလုံး စတည်ပြီဆိုတာနဲ့ ရာသီမမှန်တာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အချို့ဆိုရင် အတွင်းမှာ အလုံးတည်နေပေမဲ့ ရှိလို့ရှိမှန်း မသိကြဘူး၊၊ ဘယ်တော့မှ သိသလဲဆိုရင် အလုံးရေများလာပြီး အလုံးတွေ ကြီးထွားလာမှ ရိပ်မိလာ ကြတယ်။ ခါးနာ၊ ခါးကိုက် (Backache or leg pains) ခြေထောက်နာ၊ ခြေထောက်ကိုက်တဲ့ ဝေဒနာတွေ ခံစား လာရလိမ့်မယ်။ ဒီအလုံးဟာ သားအိမ်ရဲ့ ဟိုးအတွင်းဆုံး အပိုင်းမှာ ဖြစ်တည်နေပါလျှင် ရာသီဆင်းတာ (Heavy menstrual bleeding) များပါလိမ့် မယ်။ ဒီအလုံးဟာ သားအိမ်ရဲ့ အပြင်ဘက် အလွှာမှာ ဖြစ်တည်နေပါလျှင် ရာသီမမှန်တာ ဖြစ်တတ်သလို ရာသီးဆင်းပါကလည်း အရင်ထက် နည်းနေတတ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ချက်ရဲ့ အားနည်းချက်၊ အားသာချက် က ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အတွင်းပိုင်းမှာ ဖြစ်ရင် အဝကျယ်၍ ရာသီးဆင်စရာ လမ်းကြောင်း ပိုကျယ်လာတတ်သလို အပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်ရင် ရာသီဆင်းစရာ လမ်းကြောင်း ကျဉ်းမြောင်း သွားတတ်ပါတယ် တကယ်လို့ ဒီအလုံးဟာ ကြီးထွားပြီး ဆီးအိမ်ကို ဖိထားသလို ဖြစ်နေရင် ဆီးခဏ ခဏ သွားချင်နေမယ်။ တကယ်လို့ အူလမ်းကြောင်းကို ဖိမိနေရင် ဝမ်းချုပ်တတ်ပါတယ်။ သားအိမ်လုံး အကျိတ်၊ ရေအိတ်ကြောင့် ရာသီဆင်းတာ များသူတွေဟာ သွေးအား နည်းလာတတ်သလို အားအင်ကုန်ခမ်းပြီး အသားရေ ဖြူဖတ်ဖြူရော်ဖြစ်လာမယ်။ အသက်ရှုရတာ မဝ ဖြစ်လာမယ်။ အလိုလိုနေရင်းနဲ့ မောပန်းနေတတ်ပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ အသား၊ ငါး၊ လတ်ဆတ်သော အသီးအရွက်များများ စားသုံးပေးသင့်ပြီး သံဓာတ်ပါဝင်တဲ့ အားဆေးကို သောက်သုံးပါ။ အလုံးကြီးရင်တော့ ဗိုက်ခွဲပြီး ဖယ်ရှားရသလို၊ အလုံးသေးရင်တော့ ဆေးရုံသုံး ကိရိယာများဖြင့် မိန်းမကိုယ် အတွင်းကနေတဆင့် နှိုက်၍ ဖယ်ရှားရပါတယ်။ ဒီလို ဖယ်ရှားပြီး သူတိုင်းဟာ ကလေးယူလို့ မနိုင်တော့သလို ကံမကောင်းရင်ဖြင့် သားအိမ်ကို ဖြတ်ထုတ် ဖယ်ရှားပစ်သည့်အထိ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ဒီအလုံးဟာ ကင်ဆာဆဲလ် မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့် ခွဲစိတ်ကုသရင် ဖြင့် ပျောက်ကင်း သက်သာနိုင်သလို ခွဲစိတ်ကုသပြီးပေမဲ့လည်း ပြန်လည် ဖြစ်တည်လာ တတ်ပါတယ်။ Purtier Placenta (6th Edition)(ပါတီးရား ပလန်ဇန်တာ) Live Stem Cell Therapy (ရှင်သန်ဆဲလ် ပင်မဆဲလ်ကုထုံး) သည် မည်သည်ဆိုးကျိုးမှမရှိဘဲ လူသားအတွက် ကောင်းကျိုးကိုသာပေးသော သဘာဝဓါတ်စာဖြစ်ပါတယ်။ Purtier Placenta ဆိုတာ live stem cell therapy ဆိုတဲ့ ပင်မဆဲလ်ရှင်ကုထုံးနည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့ ကျန်းမာရေးဖြည့်စွက်စာ ဖြစ်ပါတယ်။ Purtier Placenta ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကဘာတွေလဲ? =========================== ဒါကတော့ အရမ်းကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ပါ။ Purtier Placenta ထဲမှာ ingredients(ပါဝင်ပစ္စည်း) 12 မျိုးပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ 1 Deer placenta (သမင်အချင်းဆဲလ်အရှင်) 2. NucleiClavem™ (စတော်ဘယ်ရီသီး အဖြူရောင်) 3. Fucoidan (ဖူကွိုတ်ဒန် ပင်လယ်ရေမှော်) 4. Apple Polyphenol (ပန်းသီး ပိုလီဖနော) 5. Dandrobium (ဒန်ဒရိုဗီယမ် သစ်ခွ) 6. Marine Collagen 7. Evening Primrose Oil (ဇီဇဝါပန်းအဆီ) 8. Squalene (ပင်လယ်နက်ငါးမန်းအသည်းဆီတွင်ပါဝင် သော ပျစ်ချွဲအရည်) 9. Avocado Oil (ထောပတ်သီးအဆီ) 10. Borage Oil (အရည်ပြားစိုပြေနူးညံ့စေသည့် အဆီ) 11. Aloe Vera (ရှားစောင်းလက်ပတ်) 12. Lycopene (ခရမ်းချဉ်သီး) တို့ပါဝင်ပါတယ်။ ingredients တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အာနိသင်ကို အောက်ကပုံတွေမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုနည်းပညာတွေသုံးထားတာလဲ? =========================== 1) အေးခဲခြောက်သွေ့စေသည့်နည်းပညာ 2) နိုက်ထရိုဂျင်ဖြည့်ထားသည့် နည်းပညာ 3) ဆေးတောင့်အား အပြင်လွှာ အုပ်ထားသောနည်းပညာ 4) Nano နည်းပညာ 5) ဘိုင်အိုဆော့ဖ်ဂျယ် နည်းပညာ ) အီမြူဆီဖီကေးရှင်း နည်းပညာ စတဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဘယ်လိုလူတွေသောက်သင့်သလဲ? ⚜ ကျန်းမာရေး လိုက်စားပြီး ရောဂါကို ကာကွယ်လိုသူ ⚜အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို နှေးကွေစေပြီး နုပျိုလှပလိုသူ ⚜အောက်ပါရောဂါများကို ခံစားနေရပြီး အမြန်သက်သာကျန်းမာလိုသူ 🌼 အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကူးဆက်ရောဂါ 🌼 နာတာရှည် အဆုတ်ရောင်ရောဂါ 🌼 နှလုံးရောဂါ 🌼 အယ်ဇိုင်းမားရောဂါ 🌼 သွေးတိုး ရောဂါ 🌼 ဆီးချို ရောဂါ 🌼 ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ 🌼 အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါ 🌼 အူမကြီးကင်ဆာရောဂါ 🌼 အသည်းရောဂါ 🌼 ခုခံအားကျဆင်းရောဂါ 🌼 အရောပြားရောဂါ 🌼 ကျောက်ကပ်ရောဂါ 🌼 ကင်ဆာရောဂါအမျိုးမျိုး စသော ရောဂါများကို ခံစားနေရသော မိတ်ဆွေများအတွက် လွန်စွာမှ ကျန်းမာရေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။ ဆဲလ်အစားထိုးကုထုံး ဖြစ်သဖြင့် မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ပျက်စီးနေသော ဆဲလ်များကို ပြုပြင်ပေးပြီး အသစ်ထုပ်လုပ်ပေးတာကြောင့် ဆဲလ်များ ကျန်းမာလာပြီး ရောဂါများကို သက်သာစေပါတယ်။ ========================== ဘယ်ကထုတ်တာလဲ? =============== Purtier Placenta ဆိုတာ စင်ကာပူနိုင်ငံအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ RIWAY international ကုမ္ပဏီရဲ့ product တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ New Zealand နိုင်ငံ ကနေထုတ်လုပ်တဲ့ product တစ်ခုလဲဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ New Zealand ဆိုတာကလဲ ကမ္ဘာ့မြေထု၊ ရေထု၊ လေထု ညစ်ညမ်းမှုအနည်းဆုံး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ 💥 လေထုညစ်ညမ်းမှုကင်းစင်တဲ့ New Ze‌aland နိုင်ငံတွင်ထုပ်လုပ်ထားပြီး စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ နိုင်ငံပေါင်း ၁၂နိုင်ငံကိုဖြန့်ချီပါတယ်။ Purtier Placenta ကို လူသန်းပေါင်းများစွာ ယုံကြည်စိတ်ချစွာစားသုံးပြီး သိသာတဲ့ ရလဒ်ပေါင်းများစွာနဲ့ ရပ်တည်နေတာ ၁၂နှစ်ပင် တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို လူကြီးမင်းတို့ကလဲ Purtier Placenta ဆိုတာ အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ product တစ်ခုဆိုတာကို ခန့်မှန်းမိမှာပါ။ Purtier Placenta ဆိုတာ live stem cell therapy ဆိုတဲ့ ပင်မဆဲလ်ရှင်ကုထုံးနည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့ ကျန်းမာရေးဖြည့်စွက်စာ ဖြစ်ပါတယ် Crd kothiha ဆက်သွယ်ရန် Ko soe Ph 09980000859,09666684939 Cd. Mee Mee May Maung #Credit #Copy https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1830030980505752&id=100004966034390
ပေါ့ဆလို့မရဘူးနော် အမျိုးသမီးထုကြီးတို့ ဆေးရုံမှအလူးအလဲခံစားနေရတာတွေ မမြင်ရက်ဘူး အမျိုးသမီးထုကြီး ဂရုစိုက်ကြပါ အမျိုးသမီး အများစုမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ သားအိမ်လုံးတည်ခြင်း ရောဂါ အကြောင်း ဒါကတော့ အမျိုးသမီး အများစုမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ Uterine fibroid လို့ခေါ်တဲ့ သားအိမ်လုံးတည်ခြင်း ရောဂါ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။ Uterine ဆိုတာက သားအိမ်နဲ့ ဆိုင်သော၊ သားအိမ်နဲ့ ပတ်သက်သောဟု ခေါ်ဆိုပါ တယ်။ Fibroid ဆိုတာကအမျှင်ကြမ်း တစ်ရှုးမျှင် များနှင့်ဆိုင်သော၊ သားအိမ်တွင် ပေါက်နေ သော၊ ကု၍ ရသည့် အမျှင်ကြမ်း အသားလုံးကို ခေါ်ဆိုပါတယ်။ သားအိမ်အလုံး ဆိုသည်ထက် ”ရေအိတ်”ဟု အများက သိထားကြတယ်။ ဒီအရာက ဖြစ်တည်ပုံ သုံးမျိုး၊သုံးစား၊ သုံးနေရာရှိတယ်။ (1) Intramural fibroids ‘ဆိုတာက သားအိမ်အလုံးဟာ သားအိမ်ရဲ့ အတွင်းနံရံမှာ ( grow in the wall of the uterus ) ဖြစ်တည်နေတာပါ။ (2) Subserosal fibroids ဆိုတာက သားအိမ်ရဲ့ အပြင်ဘက်အလွှာ ( grow on the outside of the uterus) မှာ ဖြစ်တည် နေတာပါ။ (3) Submucosal fibroids ဆိုတာက သားအိမ်ရဲ့ အတွင်းဆုံ အလွှာကနေ ဖြစ်တည်နေတာပါ။ ဒီသားအိမ်လုံး၊ သားအိမ်အကျိတ် (ခေါ်) သားအိမ်ရေအိတ်ဟာ တစ်လုံး (သို့မဟုတ်) တစ်လုံးထက်ပိုပြီး ၃/၄ လုံးအထက် ဖြစ်တည် နေတတ်ပါတယ်။ အလုံး အသေးလေးကနေပြီး အလုံး အကြီးကြီးထိ ဖြစ်တည်လာနိုင်သလို အရွယ်အစားအားဖြင့်လည်းမတူညီပါဘူး။ အချို့ဆိုရင် အလုံးက ကြီးနေလို့ ကိုယ်ဝန်သည် မိခင်လောင်း ဗိုက်မှ မြင်တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သားအိမ် (Uterus) ထဲမှာ ဒီအလုံး စတည်ပြီဆိုတာနဲ့ ရာသီမမှန်တာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အချို့ဆိုရင် အတွင်းမှာ အလုံးတည်နေပေမဲ့ ရှိလို့ရှိမှန်း မသိကြဘူး၊၊ ဘယ်တော့မှ သိသလဲဆိုရင် အလုံးရေများလာပြီး အလုံးတွေ ကြီးထွားလာမှ ရိပ်မိလာ ကြတယ်။ ခါးနာ၊ ခါးကိုက် (Backache or leg pains) ခြေထောက်နာ၊ ခြေထောက်ကိုက်တဲ့ ဝေဒနာတွေ ခံစား လာရလိမ့်မယ်။ ဒီအလုံးဟာ သားအိမ်ရဲ့ ဟိုးအတွင်းဆုံး အပိုင်းမှာ ဖြစ်တည်နေပါလျှင် ရာသီဆင်းတာ (Heavy menstrual bleeding) များပါလိမ့် မယ်။ ဒီအလုံးဟာ သားအိမ်ရဲ့ အပြင်ဘက် အလွှာမှာ ဖြစ်တည်နေပါလျှင် ရာသီမမှန်တာ ဖြစ်တတ်သလို ရာသီးဆင်းပါကလည်း အရင်ထက် နည်းနေတတ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ချက်ရဲ့ အားနည်းချက်၊ အားသာချက် က ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အတွင်းပိုင်းမှာ ဖြစ်ရင် အဝကျယ်၍ ရာသီးဆင်စရာ လမ်းကြောင်း ပိုကျယ်လာတတ်သလို အပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်ရင် ရာသီဆင်းစရာ လမ်းကြောင်း ကျဉ်းမြောင်း သွားတတ်ပါတယ် တကယ်လို့ ဒီအလုံးဟာ ကြီးထွားပြီး ဆီးအိမ်ကို ဖိထားသလို ဖြစ်နေရင် ဆီးခဏ ခဏ သွားချင်နေမယ်။ တကယ်လို့ အူလမ်းကြောင်းကို ဖိမိနေရင် ဝမ်းချုပ်တတ်ပါတယ်။ သားအိမ်လုံး အကျိတ်၊ ရေအိတ်ကြောင့် ရာသီဆင်းတာ များသူတွေဟာ သွေးအား နည်းလာတတ်သလို အားအင်ကုန်ခမ်းပြီး အသားရေ ဖြူဖတ်ဖြူရော်ဖြစ်လာမယ်။ အသက်ရှုရတာ မဝ ဖြစ်လာမယ်။ အလိုလိုနေရင်းနဲ့ မောပန်းနေတတ်ပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ အသား၊ ငါး၊ လတ်ဆတ်သော အသီးအရွက်များများ စားသုံးပေးသင့်ပြီး သံဓာတ်ပါဝင်တဲ့ အားဆေးကို သောက်သုံးပါ။ အလုံးကြီးရင်တော့ ဗိုက်ခွဲပြီး ဖယ်ရှားရသလို၊ အလုံးသေးရင်တော့ ဆေးရုံသုံး ကိရိယာများဖြင့် မိန်းမကိုယ် အတွင်းကနေတဆင့် နှိုက်၍ ဖယ်ရှားရပါတယ်။ ဒီလို ဖယ်ရှားပြီး သူတိုင်းဟာ ကလေးယူလို့ မနိုင်တော့သလို ကံမကောင်းရင်ဖြင့် သားအိမ်ကို ဖြတ်ထုတ် ဖယ်ရှားပစ်သည့်အထိ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ဒီအလုံးဟာ ကင်ဆာဆဲလ် မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့် ခွဲစိတ်ကုသရင် ဖြင့် ပျောက်ကင်း သက်သာနိုင်သလို ခွဲစိတ်ကုသပြီးပေမဲ့လည်း ပြန်လည် ဖြစ်တည်လာ တတ်ပါတယ်။ Purtier Placenta (6th Edition)(ပါတီးရား ပလန်ဇန်တာ) Live Stem Cell Therapy (ရှင်သန်ဆဲလ် ပင်မဆဲလ်ကုထုံး) သည် မည်သည်ဆိုးကျိုးမှမရှိဘဲ လူသားအတွက် ကောင်းကျိုးကိုသာပေးသော သဘာဝဓါတ်စာဖြစ်ပါတယ်။ Purtier Placenta ဆိုတာ live stem cell therapy ဆိုတဲ့ ပင်မဆဲလ်ရှင်ကုထုံးနည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့ ကျန်းမာရေးဖြည့်စွက်စာ ဖြစ်ပါတယ်။ Purtier Placenta ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကဘာတွေလဲ? =========================== ဒါကတော့ အရမ်းကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ပါ။ Purtier Placenta ထဲမှာ ingredients(ပါဝင်ပစ္စည်း) 12 မျိုးပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ 1 Deer placenta (သမင်အချင်းဆဲလ်အရှင်) 2. NucleiClavem™ (စတော်ဘယ်ရီသီး အဖြူရောင်) 3. Fucoidan (ဖူကွိုတ်ဒန် ပင်လယ်ရေမှော်) 4. Apple Polyphenol (ပန်းသီး ပိုလီဖနော) 5. Dandrobium (ဒန်ဒရိုဗီယမ် သစ်ခွ) 6. Marine Collagen 7. Evening Primrose Oil (ဇီဇဝါပန်းအဆီ) 8. Squalene (ပင်လယ်နက်ငါးမန်းအသည်းဆီတွင်ပါဝင် သော ပျစ်ချွဲအရည်) 9. Avocado Oil (ထောပတ်သီးအဆီ) 10. Borage Oil (အရည်ပြားစိုပြေနူးညံ့စေသည့် အဆီ) 11. Aloe Vera (ရှားစောင်းလက်ပတ်) 12. Lycopene (ခရမ်းချဉ်သီး) တို့ပါဝင်ပါတယ်။ ingredients တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အာနိသင်ကို အောက်ကပုံတွေမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုနည်းပညာတွေသုံးထားတာလဲ? =========================== 1) အေးခဲခြောက်သွေ့စေသည့်နည်းပညာ 2) နိုက်ထရိုဂျင်ဖြည့်ထားသည့် နည်းပညာ 3) ဆေးတောင့်အား အပြင်လွှာ အုပ်ထားသောနည်းပညာ 4) Nano နည်းပညာ 5) ဘိုင်အိုဆော့ဖ်ဂျယ် နည်းပညာ ) အီမြူဆီဖီကေးရှင်း နည်းပညာ စတဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဘယ်လိုလူတွေသောက်သင့်သလဲ? ⚜ ကျန်းမာရေး လိုက်စားပြီး ရောဂါကို ကာကွယ်လိုသူ ⚜အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို နှေးကွေစေပြီး နုပျိုလှပလိုသူ ⚜အောက်ပါရောဂါများကို ခံစားနေရပြီး အမြန်သက်သာကျန်းမာလိုသူ 🌼 အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကူးဆက်ရောဂါ 🌼 နာတာရှည် အဆုတ်ရောင်ရောဂါ 🌼 နှလုံးရောဂါ 🌼 အယ်ဇိုင်းမားရောဂါ 🌼 သွေးတိုး ရောဂါ 🌼 ဆီးချို ရောဂါ 🌼 ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ 🌼 အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါ 🌼 အူမကြီးကင်ဆာရောဂါ 🌼 အသည်းရောဂါ 🌼 ခုခံအားကျဆင်းရောဂါ 🌼 အရောပြားရောဂါ 🌼 ကျောက်ကပ်ရောဂါ 🌼 ကင်ဆာရောဂါအမျိုးမျိုး စသော ရောဂါများကို ခံစားနေရသော မိတ်ဆွေများအတွက် လွန်စွာမှ ကျန်းမာရေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။ ဆဲလ်အစားထိုးကုထုံး ဖြစ်သဖြင့် မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ပျက်စီးနေသော ဆဲလ်များကို ပြုပြင်ပေးပြီး အသစ်ထုပ်လုပ်ပေးတာကြောင့် ဆဲလ်များ ကျန်းမာလာပြီး ရောဂါများကို သက်သာစေပါတယ်။ ========================== ဘယ်ကထုတ်တာလဲ? =============== Purtier Placenta ဆိုတာ စင်ကာပူနိုင်ငံအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ RIWAY international ကုမ္ပဏီရဲ့ product တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ New Zealand နိုင်ငံ ကနေထုတ်လုပ်တဲ့ product တစ်ခုလဲဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ New Zealand ဆိုတာကလဲ ကမ္ဘာ့မြေထု၊ ရေထု၊ လေထု ညစ်ညမ်းမှုအနည်းဆုံး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ 💥 လေထုညစ်ညမ်းမှုကင်းစင်တဲ့ New Ze‌aland နိုင်ငံတွင်ထုပ်လုပ်ထားပြီး စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ နိုင်ငံပေါင်း ၁၂နိုင်ငံကိုဖြန့်ချီပါတယ်။ Purtier Placenta ကို လူသန်းပေါင်းများစွာ ယုံကြည်စိတ်ချစွာစားသုံးပြီး သိသာတဲ့ ရလဒ်ပေါင်းများစွာနဲ့ ရပ်တည်နေတာ ၁၂နှစ်ပင် တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို လူကြီးမင်းတို့ကလဲ Purtier Placenta ဆိုတာ အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ product တစ်ခုဆိုတာကို ခန့်မှန်းမိမှာပါ။ Purtier Placenta ဆိုတာ live stem cell therapy ဆိုတဲ့ ပင်မဆဲလ်ရှင်ကုထုံးနည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့ ကျန်းမာရေးဖြည့်စွက်စာ ဖြစ်ပါတယ် Crd kothiha ဆက်သွယ်ရန် Ko soe Ph 09980000859,09666684939 Cd. Mee Mee May Maung #Credit #Copy https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1830030980505752&id=100004966034390 DNA ဆဲလ်အရှင်ကုထုံးဖြင့်မကျန်းမာခြင်းကိုတော်လှန်ခြင်း 21 Oct 2020 · 19K views